Semalt Expert Shares 10 fitaovana fandinganana tranonkala ho an'ny programera
Ny fampiasana tranonkala amin'ny sehatra samihafa, fanangonana antontan-kevitra mahasoa ho an'ny webmasters, manam-pahaizana, mpanao gazety, mpandrindra, mpamorona, ary bilaogera. Manampy amin'ny famoahana angon-drakitra avy amin'ny tranonkala maro izy ireo ary ampiasain'ireo orinasa sy orinasa mpikaroka momba ny tsena. Izy ireo koa dia ampiasaina hanakarana ny angona avy amin'ny nomeraon-telefaona sy mailaka avy amin'ny toerana samihafa - korres red lipstick. Na dia te hividy aza ianao ary te-hanaraka ny vidin'ny vokatra isan-karazany dia azonao ampiasaina amin'ny fitaovana fampiasana tranonkala sy fampiharana.
1. Cloud Scrape na Dexi.io
Cloud Scrape na Dexi.io dia manohana ny fanangonana tahiry avy amin'ny tranonkala samihafa ary tsy mila ampidinina ao amin'ny fitaovana. Midika izany fa azo ampiasaina sy ampiasaina an-tserasera ity fitaovana ity ary manana mpandrindra tranonkala ahafahana mamorona ireo zavatra natao ho anao. Ny angon-drakitra fanampiny dia azo hovonjena ao amin'ny format CSV sy JSON, ary amin'ny Box.net sy Google Drive.
Fomba fanesorana rahona sy fampiharana angona angona. Izany dia ahafahan'ireo mpamorona sy webmasters haka ireo angon-drakitra mahasoa sy fampahalalana ao anatin'ny segondra. Ny Scrapinghub dia nampiasain'ireo mpitoraka bilaogy sy mpikaroka hatramin'izao. Manana rindran-doka ho an'ny proxy izy, manohana ny bota ratsy ary manaparitaka ny habaka manontolo ao anatin'ny adiny iray.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny VisualScraper dia ny fampiharana ireo angona amin'ny format toy ny SQL, XML, CSV, ary JSON. Izy io no iray amin'ireo fampihetseham-baovao faran'izay mampihomehy sy mahasoa indrindra amin'ny aterineto ary manampy amin'ny fanangonana sy haka ilay vaovao amin'ny fotoana mahamety azy. Ny drafitry ny Premium dia handoavana $ 49 isam-bolana ary hamela anao mahazo pejy maherin'ny 100k.
Tena fantatry ny mpanorina azy an-tserasera izany ary mamorona daty samihafa ho an'ny mpampiasa. Import.io dia mampiditra data avy amin'ny tranonkala maromaro ary manondrana izany CSV rakitra. Fantatra amin'ny teknolojia avo lenta izy ary afaka mamoaka pejy an-tapitrisany isan'andro. Azonao atao ny mividy sy mampiditra import.io maimaim-poana. Izy io dia mifanaraka amin'ny Linux sy Windows ary manitsy ny kaonty an-tserasera.
Io no iray amin'ireo fitaovana fampiasa mahomby indrindra. Ity fitaovana ity dia manome ny fahazoana mora sy mivantana amin'ny angona azo antoka sy ara-potoana ary manasongadina pejy maro samihafa. Azonao atao ny manokatra valiny tianao amin'ny fiteny 200 mahery ary mamonjy ny vokatra ao amin'ny format XML, RSS ary JSON.
Manampy antsika haka ny tranonkala manontolo, bilaogy, tranonkala media sosialy, ATOM na RSS feeds. Mamonjy ny angon-drakitra amin'ny endrika azo vakina sy azo havaozina izy io, noho ny API fiarovana ho an'ny fitantanana tahirin-kevitra maromaro miaraka amin'ny fiarovana (SPAM ). Manampy amin'ny fanesorana spam izany ary manakana ny fampiasana ny fiteny tsy mendrika, manatsara ny kalitaon'ny rakitrao ary miantoka ny fiarovana azy.
Fitaovana be mpampiasa Firefox miaraka amin'ny endri-javatra maro sy ny endriky ny fandrindrana data. OutWit dia mamoaka ny angon-drakitra afa-tsy ny manangona sy mikarokaroka ny votoatinao amin'ny endrika sy azo vakina. Azonao atao ny manodina karazana tranonkala rehetra tsy mila code.
Mbola mpandrindra tranonkala mahery sy mahagaga iray hafa sy fampiharana amin'ny angon-drakitra. 80legs dia fitaovana mavitrika izay mamolavola ny fepetra takiana aminao ary manaisotra be dia be avy hatrany. Ity sora-tranonkalin'ny tranonkala ity dia nanakombom-baventy mihoatra ny 600.000 hatramin'izao ary ampiasain'ny giants tahaka ny PayPal.
10. Ny mpangalatra
Ny mpandroba dia malaza sy mahasoa ny fanitarana Chrome miaraka amin'ny fanangonana rakitra be dia be ary mahatonga ny fikarohana an-tserasera. Mampihatra ny angon-drakitra voasokitra amin'ny takelaka Google izy ary mety amin'ny mpandidy sy ny manam-pahaizana. Azonao atao ny mamaky mora foana ny rakitra ao amin'ny clipboard ary ny Scraper dia mamorona XPaths kely araka ny zavatra takinao.